Zava-misy mampatahotra sa zava-poronina mahavariana? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Avrily 2019 4:52 GMT
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny volana Oktobra 2008)
Chupacabra na Tsia avy amin'ny NaYa2Chupacabra or Not by NaYa2Tonga ny fizarana fahatelo amin'ny andiany “tarazo, matoatoa, devoly sy ny zava-mampatahotra”, ary mijery ivelan'ny sisintanin'i Amerika Latinina isika amin'ity indray mitoraka ity. Amin'ity fandefasana farany ity, mikaroka ireo Chupacabras isika, mampiditra ny lohantsika ao amin'ny fomba amam-panao Vodou, mijery ireo ohatra amin'ny fandroahana devoly sy manadihady momba ilay (mpihinana olona) mpamono olona lasa tantara malaza ao Venezoelà. Mety manafintohina ny sary sasantsasany, raha mieritreritra ianao fa mety hanohitra ny votoatiny na mino fa mety ho voahelingelina amin'izany, aza manindry ny fijerena ny sary azafady.
Nivezivezy nandritra ny 15 taona tany Amerika Latina ny Chupacabras. Teny Espaniôla midika hoe “mpitroka osy” ary ity cryptid maoderina ity dia heverina ho tapaka ramanavy, tapaka olombelona, tapaka kangoroa ary ampahany lehibe amin'ny tahotra. Ny fikarohana ny “chupacabras” ao amin'ny YouTube dia hitondra anao amin'ny horonan-tsary am-polony mampiseho biby nofinofy (biby mampatahotra): na izany aza, raha hita fa hetsika malaza ho an'ny jean manga ny lahatsary mety ho tahaka izany, araka ny filazan'ny bilaogin'ny Little Green Martian, tsy dia azo itokisana loatra ny fisian'io zavaboary io izay tsy niseho manerana an'i Amerika ihany, fa nitsambikina nankany Rosia sy ny kaontinanta Afrikana ihany koa.
Voodoo (na Vodou) no fivavahana ofisialy any Bénin, Afrika, ary iray amin'ireo fivavahana lehibe indrindra any amin'ny Nosy Karaiba ao Haiti ihany koa. Ary rehefa miresaka momba ny Voodoo ianao, dia hieritreritra angatra (matoatoa) avy hatrany ny ankamaroan'ny olona. Nolazaina fa olombelona nomena rongony mifangaro amin'ny vovon-javatra manokana izay manakana ny fiasan'ny taova iankinan'ny aina sy mitondra azy ireo ho any amin'ny tsy fahatsiarovan-tena tsy fantatra fa toy ny fahafatesana, na izany aza, raha mandavaka azy ireo na mamonjy azy ireo any am-pasan'izy ireo ny pretra (lahy na vavy) Voodoo, dia afaka mitondra azy ireo hiverina amin'ny fiainana indray ary manao azy ireo ho toy ny andevo tsy misy saina. Ao anatin'ity lahatsary ampahany avy amin'ny vondrona Grika, Exandas ity, asehon'ny pretra voodoo sy ny vahoaka ny fombafomba manodidina ny matoatoa [na lasan'ambiroa]. Ity horonantsary hafa ity dia ahitana sary avy amin'ny fomba amam-panao voodoo izay atao any Brooklyn, New York ahitana ireo mpikambana avy amin'ny fiarahamonina izay itoeran'ny fanahy samihafa. Nalain'ilay mpaka sary Stephanie Keith nandritra ny lanonana 10 samihafa ny sary ary notantarainy ihany koa.
Iray amin'ireo lohahevitra izay heverin'ny olona ho nofinofy sy raisin'ny hafa fa tena misy ny fandroahana devoly. Mikasika ny fiainan'i Anneliese Michel tany Alemaina ny sarimihetsika vao haingana momba ny fandroahana devoly, izay maty noho ny fiheverana fa vokatry ny fitoeran'ny demonia. Ny lahatsary manaraka kosa mampiseho ny feo avy amin'ny zavatra lazaina fa fotoana nandroahana devoly azy ary ahitana sary misy azy nandritra ny fotoana nilazàna fa nisy devoly izy.
Misy any amin'ny fivavahana samihafa ny fandroahana devoly, na dia fomban'ny katolika amin'ny fandroahana devoly aza no asongadina indrindra amin'ny sarimihetsika Hollywood. Amin'ity lahatsary manaraka ity, hitantsika ny fiheveran'ilay mpisera YouTube Dimag ny atao hoe fomba fandroahana devoly Islamika natao tany Brunei.
Ary ankehitriny, avy amin'ny tontolo mampatahotra hita maso indrindra, lasa tranga ara-kolontsaina malaza ny andiana mpamono olona nihinana ny fatin'ireo tra-boina tany Venezoelà, nitarika famoronana hira, tao amin'ny tarika nentim-paharazana Venezoeliana joropo tuyero niaraka tamin'ny gadona elektronika nifangaro taminy, izay azonao henoina ato amin'ity pejy ity, kaonty hosoka myspace manana namana sivy amby efa-polo ary koa lahatsary youtube [es] miaraka amin'ny resadresaka sy horonantsary avy amin'ny loharanom-baovao hafa izay ahitàna azy manonona ny teniny malaza ratsy indrindra hoe: “Tsy adala aho, fa te-hihinana olona fotsiny”.
Ho an'ny matoatoa, devoly, angano sy arirarira manerana izao tontolo izao, tsidiho azafady ny pejy misy ny Fitantarana Manokana.